မြ၀တီ - (၇၄)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ဂုဏ်ပြု အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
(၇၄)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ဂုဏ်ပြု အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
Saturday, 23 March 2019 09:54 font size decrease font size increase font size
(၇၄)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ကို ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုသောအားဖြင့် စေတနာရှင် အလှူရှင်များက ဂုဏ်ပြု အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၊ စစ်ကြောရေးနှင့် တည်းခိုရေးစခန်းရှိ ဆင်ဖြူရှင် ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ တပ်မတော်နေ့ ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေး၊ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မြင့်မော်၊ တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြမှူးကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်ဟိန်းနှင့် စစ်ကြောင်းမှူးများ၊ အလှူရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ အလှူရှင်များဖြစ်ကြသော မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ၁၇၆ ခု၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးချုပ်၊ ကုမ္ပဏီနှင့် စက်ရုံများ၊ International Gateways Co., Ltd.၊ Miya Win International Ltd.၊ Sky Aviator Co., Ltd.၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ၅၂ ခု၊ မြဝတီဘဏ်လီမိတက်၊ နန်းသဇင်ထရေးဒင်း လီမိတက်၊ Victory Myanmar Group Co., Ltd. ၊ ဒဂုံဝင်းဝင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ King Royal Technologies Co.,Ltd.၊ Star Sapphire Group of Companies ၊ Grand Royal Group, Myanmar Distillery Co.,Ltd. ၊ လိုတိုင်းရတောင်းတိုင်းရ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Authentic Co.,Ltd.၊ မြင့်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Sky One Co.,Ltd. ၊ အရုဏ်ဦးကုမ္ပဏီ လီမိတက်၊ အေးချမ်းငြိမ်းကျော် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၊ ခေတ်သစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ နောင်တုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဓနထွန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကိုကိုမြင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Myanmar Automobile Group Holding Co., Ltd.၊ အောင်မြင်သူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ လင်းလက်ဝင်းကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ခန့်ရွှေပြည်ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်မိုးအောင်နှင့်ဇနီး ဒေါက်တာ ဒေါ်အေးခိုင်ညွန့်၊ စာရေးဆရာမ တင်ရီမ(ညောင်ဦး)၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်ချို(ကိုချိုစံ)၊ ဒေါက်တာသာထွန်းဦးတို့ ပါဝင်သော စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ ၂၇၃ ခုတို့မှ ဂုဏ်ပြုအလှူငွေ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၈၆၆၄ သိန်းကျော်အား ပေးအပ် လှူဒါန်းကြရာ တပ်မ တော်နေ့ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ကြသည်။
ထို့နောက် အလှူရှင်များ ကိုယ်စား အလှူရှင်တစ်ဦးက လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂုဏ်ပြုအလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ အပြီးတွင် ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးက တက်ရောက်လာကြသူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 324 times Last modified on Saturday, 23 March 2019 09:55
More in this category: « ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ကျုံကူးကျေးရွာရှိ ဒေသခံပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် နန့်မြစ်ခတံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်းတို့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေး »